CHRR Ambovombe: zaza telo maty tao amin’ny Creni | NewsMada
CHRR Ambovombe: zaza telo maty tao amin’ny Creni
Miasa mafy ny mpanentana ara-pahasalamana eny ifotony ao amin’ny Crenam ka tsy tonga eny amin’ny Creni intsony ny zaza tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo ao Ambovombe.
Tao anatin’ny herinandro, tsy nisy zaza tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika miaraka amin’ny fahasarotana noraisina an-tanana ao amin’ny centre de récupération et d’éducation nutritionnel intensif (Creni) ao amin’ny CHRR Ambovombe, araka ny fanazavan’ny tomponandraikitry ny fanjarian-tsakafo amin’ny sampandraharaham-paritra misahana ny fahasalamana ao Androy, Retofa Germaine. Azo ambara fa mihatsara ny tsy fanjarian-tsakafo amin’ny ankapobeny. Efa voaray an-tanana mialoha eny amin’ny Crenas eny anivon’ny CSB sy Crenam ao anatin’ny fokontany ny tsy fanjarian-tsakafo ka tsy tonga amin’ny Creni intsony.
Ny volana janoary ka hatramin’ny jona lasa teo, 35 ny zaza tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo niditra tao amin’ny Creni. 31 tamin’ireo nalefa eny amin’ny Crenas nanohy ny fitsaboana, telo sitrana, telo hafa kosa maty. Ireo eo anelanean’ny 24-59 volana no tena tratrany indrindra rehefa amin’ny volana janoary hatramin’ny avrily, fotoan’ny maitsoahitra. Misy maty ny zaza voan’ny tsy fanjarian-tsakafo raisina an-tanana noho ny aretina mahazo azy ka mamparefo ny fahasalamany. Zaza iray tratran’ny tsimokaretina VIH Sida no namoy ny ainy satria sady voan’ny fivalanana izy no niampy aretina tiberkilaozy koa.
Omena ronono sahaza sy fanafody
Maimaimpoana ny fitsaboana ny zaza voan’ny tsy fanjarian-tsakafo ao amin’ny hopitaly. Mahazo sakafo sy bodofotsy koa ny reny. Dimy ka hatramin’ny 13 andro no karakaraina ao amin’ny Creni ny zaza arakaraka ny fivoaran’ny lanjany sy ny fahasalamany.
Indraindray rehefa mitombo lanja ny zaza, alefa amin’ny Crenas akaiky azy izy ireo hanohy ny fitsaboana. Misy nefa ireo miverina eny amin’ny Creni indray satria tsy ampy ny sakafo any an-tokantrano ka mihen-danja indray ilay zaza.
Rehefa tonga ao amin’ny hopitaly, omena ronona sahaza miaraka amin’ny fanafody plumpy nut ilay zaza. Manome ny fanafody sy ny ronono ary ny fitaovana rehetra amin’ny fanaraha-maso ny fitombon’ny zaza (fandanjana, metatra) ny Unicef. Misy toeram-pitehirizana fanafody sy fitaovana ao amin’ny CHRR Ambovombe niasa nanomboka ny taona 2015. Napetraka izany hamatsiana ny distrika rehetra ao Androy miampy ny distrika any Anosy ary ny distrika roa ao Atsimo Andrefana. Maharitra hatramin’ny enim-bolana ny tahirim-panafody sy ronona ary fitaovana 37 t 500.
11% ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika
Ho an’ny faritra Androy, ny taona 2017, nahatratra 11% ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika araka ny fanadihadiana ary tafiditra ao amin’ny sokajy fanairana.
Manana CSB 74 ahitana Crenas ny faritra ary mandeha avokoa izy ireo, efatra kosa ny Creni.